Olee otú Jiri Wondershare DreamStream
Gbalịa Ọ Free N'ihi Windows
Nkebi nke 1: Jikwaa gị Obodo, echekwa Media Content
Nkebi nke 2: gụgharia na Google Chromecast
DreamStream-enyere gị aka mfe ijikwa niile dijitalụ media ọdịnaya echekwara na kọmputa gị. Ọ na-akpaghị aka enyocha kwa na ụdị n'ụzọ nkịtị niile ẹdude media faịlụ na draịvụ ike gị, gụnyere niile ụdị nke faịlụ formats dị ka avi, MKV, MOV, flv, m2ts, mp4, mp3, wma, na wdg a bụ otú o-arụ ọrụ:
1. Mgbe ị wụnye na ẹkedori Wondershare DreamStream, usoro ihe omume-enye gị ohere akpaghị aka iṅomi dum ike mbanye na nwere niile dakọtara media faịlụ indexed n'ime DreamStream n'ọbá akwụkwọ. Oge ọ bụla ị nwere ụfọdụ ndị ọhụrụ media faịlụ kwukwara jidesie gị na kọmputa, dị nnọọ pịa "Nwee Ume" button, DreamStream ga-eme a ngwa ngwa Doppler na ndị nwere ọhụrụ ọdịnaya atụkwasịkwara gị media Archive.
2. Na ekpe n'akụkụ nke panel, ị nwere mgbasa ozi faịlụ categorized n'ime Video na Music. Ị nwere ike mfe ịchọta ọkacha mmasị gị fim ma ọ bụ songs site navigating site na "Computer" ndekọ, ma ọ bụ site na iji search mmanya n'elu.
3. Ịnwere ike iji aka wepụ na-achọghị media faịlụ site na gị ọbá akwụkwọ ma ọ bụ nwere ha ehichapụ kpamkpam. DreamStream na-abịa na Mee na-eluigwe na ala mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enye gị ka kama ihuchalu ma ọ bụ na-egwu ọ bụla media faịlụ mgbe ị na-agagharị site na gị collections.
Wondershare DreamStream bụ ụwa nke mbụ ike SDK ngwa na-enye ohere Chromecast iji strimụ tubà echekwara media ọdịnaya jidesie HD TV. Ebe a bụ otú o si arụ ọrụ:
1. Jide n'aka gị na kọmputa na-Chromecast ngwaọrụ ndị na-na otu obodo netwọk, na plugged-in Chromecast kwesịrị ekwesị nke bụ guzobere. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ na otú melite Your Google Chromecast Ngwaọrụ.
2. Ugbu a, họrọ media faịlụ na ị chọrọ ikpu na TV, site na ịpị "Wụnyenụ" bọtịnụ dị na nri-ala akuku. I nwekwara ike igosi na gụgharia edinam site na ịpị otu nkedo button na-egwu egwu faịlụ na mgbasa ozi ọkpụkpọ.
3. Mgbe guzosie ike a nke ọma gụgharia njikọ, ị pụrụ ịchịkwa olu na ndị ọzọ na playback nhọrọ nke TV ngosi kpọmkwem site mgbasa ozi ọkpụkpọ panel.
Ọkụ gị videos, audios na ihe oyiyi ike DVD na enyemaka nke a mfe iji ma dị ike DVD Okike. DVD Creator Bụ ugbu a n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 10. Mụtakwuo